Pun Hlaing September 2020 Newsletter: The Club Lounge is fresher, spacious and much more inviting
By Win Pa Pa Myo @ Grace
The Club Lounge, Sales & Leasing Gallery Soft Opening
We are pleased to inform you the iconic Club Lounge is reopened to residents and members on Friday 28 August 2020 following extensive renovations that left the entire Club House closed foracouple of months recently. It isalot fresher, brighter and feelsalot lighter. It is much more inviting which is something that we want to achieve. You will also notice the sales and leasing gallery has undergoneamajor facelift when you are there.
It isaperfect place to readabook or haveachat amongstafew friends. Your favourite cuppa tea or coffee available from 9am to 5pm. Enquire at extension 1406 or call 01-368 7778.
နားနေခန်းမ၊ အရောင်းနှင့် အငှားပြခန်းသစ် ဖွင့်လှစ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် လအတော်တန်ကြာ ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်နေသည့် Club Lounge တခုလုံးကို အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများနှင့် အသင်းဝင်များအတွက် ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက် သောကြာနေ့ မှစတင်၍ နား‌နေဆောင်အသစ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာနှင့် အသိပေးလိုပါတယ်။ ယခုတွင် ပိုမိုသစ်လွင်၊ လန်းဆန်းပြီး နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည့် နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်လို့လာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ‌မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုပြီး နေချင်စဖွယ်ကောင်းသည့်နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်း ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ထိုနေရာကို ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာ အရောင်းနှင့် အငှားခန်းမကိုလည်း အကြီးစား မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်း စာအုပ်လေးပဲ အေးအေးဆေးဆေးဖတ်မလား (ဒါမှမဟုတ်) ချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြောဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီတို့ကိုလည်း မနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရီ အထိ သုံးဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက extension 1406 (သို့မဟုတ်) 01-368 7778 တို့ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
The Science of Happiness & Well-being: Living at Pun Hlaing Estate
Living in high density area is often associated with our mental and physical wellness. Lack of green spaces or social activities cause significant impact on health problems and social matters. If you are looking to move intoalow density estate, do contact our sales and leasing gallery manager Ms Ei Kay Khine at eikaykhine@yomaland.com to discuss your residential options.
ကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ခြင်းရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်: ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်း နေထိုင်ခြင်း
လူဦးရေသိပ်သည်းမှုများတဲ့နေရာတွေမှာ နေထိုင်ရခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေပါတယ်။ စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ နေရာများမရှိခြင်း၊ လူမှုရေးပွဲလမ်းသဘင်များ မရှိခြင်းတို့က ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးရာကိစ္စတွေမှာ ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ လူဦးရေသိပ်သည်းမှုနည်းပါးတဲ့ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်ဖို့ စဥ်းစားနေပြီဆိုရင်တော့ သင့်လိုချင်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို ရရှိဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အရောင်းနှင့်အငှားပြခန်း မန်နေဂျာ မအိကေခိုင် eikaykhine@yomaland.com ကို ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Meet Ei Kay Khine @ EK
EK was appointed as Club Lounge, Leasing and Sales Gallery Manager in July 2020. She joined Yoma Group in 2013 and has served in various positions, including extensive experience in hospitality, customer service and real estate management. EK is in charge of developing the team towards personalized customer relationship management and she is passionate about building positive relationships with guests and exchange cross cultural knowledges.
ဒေါ်အိကေခိုင်ကို ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လတွင် နားနေခန်းမ၊ အရောင်းနှင့်အငှားခန်းမ မန်နေဂျာအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ Yoma Group တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး hospitality, customer service နှင့် real estate management အစရှိသည့် အပိုင်းများတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူမသည် ပြခန်းသို့ လာရောက်လေ့လာသော ဧည့်သည်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို ဧည့်ဝတ်ကျေငှာမှုရှိစေရန် သူမ၏အဖွဲ့ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု ပြုလုပ်ရသည့်အပြင် ဧည့်သည်များနှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်နှင့် အမြင်ခြင်းဖလှယ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
The launch of The Hills @ Pun Hlaing,alimited edition of9villas on 9k sqft plot on 19 Sep 2020
New limited edition of nine 4,500 sqft four-bedroom detached family homes on 9,000 sqft plots. These detached family villas are located at Pun Hlaing wellness lifestyle estate and offers residentsamyriad of country club and golf club amenities & facilities. ၉,၀၀၀ စတုရန်းပေ ကျယ်ဝန်းတဲ့ မြေပေါ်မှာ တမူထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းအပြင်အဆင်တွေနဲ့ ဆောက်လုပ်မယ့် The Hills @ Pun Hlaing စီမံကိန်းသစ်
The Hills @ Pun Hlaing အမည်ရှိ သီးသန့်စီမံကိန်းသစ်မှာ မြေစတုရန်းပေ ၉,၀၀၀ ကျယ်ဝန်းပြီး ၄,၅၀၀ စတုရန်းပေအကျယ်ရှိတဲ့အိမ်မှာ အိပ်ခန်း (၄) ခန်းပါဝင်တဲ့အတွက် သင်နှင့် သင့်မိသားစု သက်တောင့် သက်သာနေထိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုနေထိုင်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ ဒီလုံးချင်းအိမ်တွေဟာ လူနေမှုအဆင့် အတန်းမြင့်သော ပန်းလှိုင်အိမ်ရာအတွင်း တည်ရှိပြီး Country Club နှင့် Golf Club လည်း အိမ်ရာတွင်းရှိသော ကြောင့် နေထိုင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။
Read More To Explore
The Residence : Virtual Tour
These exclusive serviced apartments are elegant, fully-equipped three bedroom and penthouse properties that offer the finest luxury apartment living in Yangon. Ranging from 2,107 to 4,024 sq.ft. The Residence offers add on customized housekeeping services, Country Club and/or Golf Club membership, and full package of internet, Cable TV, and utilities.
The Residence တိုက်ခန်း Virtual Tour
ဖော်ပြပါ အထူးသီးသန့် နေအိမ်တိုက်ခန်းများသည် သပ်ရပ်သန့်ရှင်းပြီး အိပ်ခန်း ၃ ခန်းနှင့် penthouse တို့ပါဝင်သည့်အပြင် ပရိဘောဂစုံလင်စွာ ဖြည့်သွင်းပေးထားသည့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ အကောင်းဆုံး ဇိမ်ခံတိုက်ခံများဖြစ်သည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ ပေ ၂,၁၀၇ မှ ၄,၀၂၄ အထိကျယ်ဝန်းသည်။ The Residence တိုက်ခန်းတွင် အိမ်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှု၊ Country Club နှင့် (သို့မဟုတ်) Golf Club အသင်းဝင်ဖြစ်ခွင့် နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်၊ Cable TV နှင့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုပါ ထပ်ဆောင်းရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Be Driven Around Town
If you are going out of the estate and asaresponsible adult, do not intend to drive afteraglass of wine, Pun Hlaing has the answer. We have signed up with FastGo to provide premium services for our residents and members.
Get the app here at (Android & iOS), https://fastgo.mobi/download.
သင့်အနေနဲ့ အိမ်ရာဝင်းပြင်ပသို့အလည်အပတ်သွားလိုသည်ဖြစ်စေ ဝိုင်ယာမကာလေးများသောက်ထားလို့ တာဝန်သိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်တိုင် ကားမမောင်းလိုသည် ဖြစ်စေ ထိုကဲ့သို့သော ကိစ္စများအတွက် ပန်းလှိုင်မှာ အဖြေရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများနှင့် အသင်းဝင်များအတွက် premium taxi ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ဖို့ FastGo Myanmar နှင့် သဘောတူစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Android နှင့် IOS Version FastGo Application ကို https://fastgo.mobi/download ရယူလိုက်ပါ။
September : What's On! / စက်တင်ဘာလ လေ့ကျင့်ခန်းအတန်းများနှင့်အစီအစဥ်များ
Cleanest Water with GAC Filter
To ensure the provision of best quality water in the estate, Pun Hlaing engineering team is currently working on the installation of new GAC (Granular Activated Carbon Filter) filters to the estate water treatment plant. The filters will be installed on 31st August and mid-September respectively.
A filter with granular activated carbon (GAC) isaproven option to remove certain chemicals, particularly organic chemicals, from water. GAC filters also can be used to remove chemicals that give objectionable odors or tastes to water such as hydrogen sulfide (rotten eggs odor) or chlorine.
GAC Filter ကိုအသုံးပြု၍ အသန့်ရှင်းဆုံးသောရေ ရရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်း
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာဝင်းအတွင်း အကောင်းဆုံးသောရေသန့်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် ပန်းလှိုင်အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းမှ ရေသန့်ပြုလုပ်သည့် water treatment plant တွင် GAC (Granular Activated Carbon Filter) အသစ်ကို တပ်ဆင်အသုံးပြုရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ရေစစ်များကို လက်ရှိရေဖြန့်ဝေပေးမှုကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန် ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့နှင့် စက်တင်ဘာလ အလယ်တွင် အသီးသီးတပ်ဆင်ရန် ပြင်ဆင်ထားသည်။
ဘာကြောင့် GAC ကိုရွေးချယ်တပ်ဆင်ရသလဲ?
GAC (Granular Activated Carbon Filter) ဟုခေါ်သည့် ရေစစ်သည် ရေအတွင်းမှ အချို့သော ဇီဝဓာတုပစ္စည်းများ ကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ GAC ရေစစ်သည် ရေသောက်ရာတွင် ကလိုရင်း (သို့မဟုတ်) ဟိုက်ထရိုဂျင် ဆာလ်ဖိုက် အနံ့ (ကြက်ဥပုတ်အနံ့) ကို ရရှိစေတတ်သည့် အရသာနှင့် အနံ့ပေးသော ဓာတုဓာတ်များကိုလည်း ဖယ်ရှားရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းရွေးချယ်တပ်ဆင်မှုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
As you might recall, last month we launched the Pun Hlaing Estate Academy in partnership with Step-in Step-Up. We are very pleased to inform you 64 trainees (and also our first batch of graduates) has benefitted from this set-up. The training program has been designed to offer long term growth and opportunity for all Pun Hlaing Estate employees with formal training including and focused onarange of topics. Join us to congratulate them on taking the first steps towards advancing their career!
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာသည် Step-In Step-Up နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ယခင်လက Pun Hlaing Estate Academy ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့်
ပထမဆုံးတက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းသား ၆၄ ယောက်သည် ထိုသင်တန်းတက်ရောက်ပြီးနောက် လက်တွေ့တွင်ပြန်လည်အသုံးချရန် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိသွားသည်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ အသိပေးအကြောင်းကြားလိုပါသည်။
သင်တန်းအစီအစဉ်သည် ဝန်ထမ်းများအတွက် ရေရှည်တိုးတက်ရေးနှင့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သင်တန်းအမျိုးအစားများစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ပန်းလှိုင်ဝန်ထမ်းများ၏ သင်တန်းပြီးဆုံးသည်အထိ မဆုတ်မနစ် ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဂုဏ်ပြုလိုက်ရအောင်။
New cases of local transmission have been reported recently. We would like to remind residents on safe practices to protect yourself and others by following some simple precautions:
ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနှုန်းကို လျော့ကျအောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
ပြည်တွင်းတွင် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအသစ်များ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို သတင်းများတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများနှင့် မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြားသောသူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မည့် အခြေခံ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် အသိပေးပြောကြားလိုပါသည်။
Fashion Trends Radar
As the world slowly reopens, customers are shedding their well-worn sweatpants, donningaface mask and emerging from their isolation cocoons to tackle the second (hopefully easier!) half of 2020. As their needs evolve, what trends do retailers need to offer moving forward? Here's what Kayla Marci has to say.
ကမ္ဘာအနှံ့မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်လည်စတင်ဖွင့်လှစ်လို့ လာနေတဲ့ အချိန်မှာ လူအများကလည်း ၎င်းတို့ ဝတ်ဆင်ပြီးသား အဝတ်အထည်များကို နှာခေါင်းစည်းအနေနှင့် ပြန်လည်ချုပ်လုပ်ပြီး ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကို ရင်ဆိုင်ရန် မိမိတို့အိမ်များတွင် သီးသန့်နေထိုင်မှု ပြုလုပ်နေခြင်းများမှ ပြန်လည်ထွက်ရှိလို့လာကြပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့သော လူအများရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ပြောင်းလဲလာတဲ့အပေါ်မှာ အဝတ်အထည်ရောင်းချသူများအနေနှင့် အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းတွေကို ရောင်းချရမလဲဆိုတာက စဥ်းစားစရာဖြစ်လို့လာပါတယ်? ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ Kayla Marci ပြောကြားထားတာကို ဖတ်ရှုကြည့်လိုက်နော်။
Hope you have enjoyed reading our September newsletter and do write us with suggestions or tell us what you would like us to feature in our next newsletter!
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စက်တင်ဘာလ သတင်းလွှာကို ဖတ်ရှုရတာ ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်လာမည့်လတွေမှာ ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြစေချင်လဲဆိုတာကိုလည်း အကြံဥာဏ်များပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
With this, we wish our Friends in SlovakiaaHappy Constitution Day (1 Sep); and Friends in Brazil (7 Sep), Mexico (16 Sep), Armenia (21 Sep), Malta (21 Sep) and Mali (22 Sep)awonderful Independence Day.
ယခုစက်တင်ဘာလ သတင်းလွှာနဲ့အတူ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် Slovakia နိုင်ငံရဲ့ Constitution Day၊ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် မက်စီကိုနိုင်ငံ၊ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် အာမေးနီးယားနိုင်ငံ၊ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် မယ်လ်တာနိုင်ငံ နှင့် ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် မာလီနိုင်ငံ တို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့များအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။
Pun Hlaing Lifestyle: November Newsletter